Uyenza njani indlela emfutshane (alias) kwiMac | Ndisuka mac
Ukwenza i-alias yesicelo, ifolda okanye ifayile ye-Mac isinika indlela elula yokufikelela kuloo nto ngaphandle kokuya kwindawo yayo yoqobo. Endaweni yokuba sinokwenza i-alias naphina kwaye iya kuqhuba okanye ivule into yoqobo kwangoko, ngelixa ifayile yoqobo okanye usetyenziso luhlala kwindawo yalo. I-alias kwi-Mac isebenza ngendlela efanayo nendlela emfutshane esebenza ngayo kwi-Windows kwaye singazibeka naphi na kwi-Mac yethu. Kwiminyaka yakutshanje bathathelwe indawo yi-Spotlight, iLaunchpad kunye neDock.
Kule nqaku siza kukubonisa indlela yokwenza ukufikelela ngokuthe ngqo kuyo nayiphi na ifayile, ifolda, uxwebhu okanye usetyenziso. Okokuqala, gcinani engqondweni ukuba iindlela ezimfutshane kwi-macOS zibizwa ngokuba zii-Aliases, kusenokwenzeka ukuba ukhe wakhangela olu khetho ngaphambili kwaye akukhange ulufumane kwinkqubo yonke. Ukongeza, indlela yokuyila kunye nendawo ezakhiwe kuyo ishiya okuninzi okunqwenelekayo, ngokuchasene noko kwenzekayo ngalo naluphi na uguqulelo lweWindows.
Yenza iindlela ezimfutshane kwi-Mac
Okokuqala, kufuneka siye kwindawo yefayile apho sifuna ukwenza ukufikelela ngokuthe ngqo okanye apho isicelo esifuna ukusenza sikhona.
Emva koko siye kwifayile okanye kwisicelo ekuthethwa ngaso kwaye ucofe kwiqhosha lasekunene.
Ngaphakathi kwimenyu yokuboniswa ebonisiweyo kufuneka sikhethe iiNdawo zokuLungisa.
Kwifolda efanayo apho amaxwebhu okanye usetyenziso esifuna ukudala iindlela ezimfutshane kuzo, i icon yefayile okanye usetyenziso luya kuboniswa ngotolo olusuka kwikona esezantsi ekunene kwikona ephezulu ngasekunene.
Ngoku kufuneka sihambise ukufikelela ngokuthe ngqo / kwi-alias apho sifuna ukuyifumana khona ukuze sikwazi ukufikelela kuyo ngokukhawuleza ngaphandle kokuhamba phakathi kwezikhombisi kwi-Mac yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyenza njani indlela emfutshane (alias) kwi-Mac
Iifoto eziBukhoma ziza kubuso beXesha leMacOS ePhakamileyo yeSierra